दुई पोइकी जोईको पति व्यवस्थापन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तीस नेपालीको खोजीमा विश्वभरका प्रहरी
उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोईरालालाई कुवेतवासी नेपालीहरुले भेटे →
दुई पोइकी जोईको पति व्यवस्थापन
हिमाली भेगका केही समुदायमा प्रचलित बहुपतिप्रथाका पछाडि सम्पत्ति विभाजित हुन नदिने, परिवार फुट्न नदिनेजस्ता व्यावहारिक कारण छन् । दुई जोईको पोइ कुना पसी रोई’ हामीले सुन्दै आएको उखान हो　। स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, पारिवारिक योजना निर्माण, प्रयोग र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुई विवाह गरेको पुरुषलाई निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिन्छ　। त्यसमाथि बहुविवाह गैरकानुनी त हुँदै हो　।
एक महिला र एक पुरुषको जोडी नै प्राकृतिक, सन्तुलित, स्वाभाविक र सामाजिक हो　। बहुविवाह कुनै पनि हालतमा विकल्प हुन सक्दैन　। तर, यहाँ ‘दुई पोइको जोईर्’को कुरा उल्लेख गर्न खोजिएको हो　। हिमाली भेगमा बस्ने केही समुदायमा एउटी महिलाका पाँच/सातजनासम्म लोग्ने हुन सक्छन् भन्ने सुनेको मात्र थिएँ　। विश्वास लागेको थिएन　। यस परम्परा, प्रचलन तथा संस्कृतिको व्यावहारिक पक्ष केही पनि थाहा थिएन　। धेरै पतिको व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्ष’bout त्यतिवेला सामान्य जानकारी पाएँ जब म माथिल्लो डोल्पामा पर्ने छार्का गाविसको ढाडगाउँ पुगे　।
गत वर्ष छार्का पुगिएको थियो　। दुनैबाट लगालग हिँडेको चौथो दिनको बासका लागि गाउँको खोजीमा थियौँ　। हिउँ पर्दापर्दै ओडा ओडेर हिँडेका थियौँ　। चार दिनको हिँडाइको थकाइले खुट्टा नियन्त्रणबाहिर जालान् भन्ने डर थियो　। यसै गाउँको पुछारमा यार्सागुम्बाको मौसममा पाल टाँगेर होटल गर्ने महिलाको घरको खोजीमा थियौँ हामी बास बस्नका लागि　। उनले नेपाली भाषा बुझ्छिन् र बोल्न पनि सक्छिन् भन्ने सुनेका थियौँ　। जो पायो त्यसलाई बास दिन्नन् भन्ने पनि सुनेका थियौँ　। सोध्दै खोज्दै हामी उनको घर पुग्यौँ　। चौँरी र घोडाको तबेला, भेडा-बाख्राको खोर पार गर्दै, लिस्नो चढ्दै, आगो तापेर बस्ने मुख्यभागमा पुग्यौँ　। त्यहाँ पाँच पुरुष आसन जमाएर पेट तताउन ‘इन्धन’ हाल्दै रहेछन्　। १६/१७ वर्षकी एक युवतीले उनीहरूका गिलास भर्दै थिइन　। हामीसँग सामान्य परिचयपछि बस्ने अनुमति पायौँ　। पिर्काहरू दिइयो　। तिब्बती चिया पिउँदै गफगाफ थाल्याँै　। त्यहाँ बसिरहेका झन्डै ६० वर्षका एक व्यक्ति हामीले खोजेकी महिलाका लोग्ने रहेछन्　। परिवार सबै गाउँको सिरानमा भएको पुरानो घरमै बस्दा रहेछन्　। हामी पनि बस्न माथिकै घरमा जानुपर्ने भयो　। केही छिनको बसाइ र चियापछि हामी माथिको घरमा जान तयार भयौँ　। पुनः झोलाहरू बोकिए, ओडाहरू ओढिए　। करिब २०-२५ मिनेटको चढाइपछि गन्तव्यमा पुगिएछ　।
बाघजस्तो भोटेकुकुर गेटमै थियो　। हामी सँगै त्यही घरका एक व्यक्ति भएको हुनाले धन्न केही गरेन　। यस भेगमा पाल्तु जनावरलाई अन्याय गरेर अलग स्थानमा राखिएको हँुदैन　। आफू बस्ने घरको सबैभन्दा तातो तथा भुइँतलामा राखिएको हुन्छ उनीहरूलाई　। जेनतेन लिस्नु चढी घरको मुख्य स्थानमा पुगियो　। चुलोवरिपरि केही बालबालिका र एक अधबैंसे पुरुष पनि बसेका थिए । त्यहाँ ५०/५५ वर्षकी एक महिला घरायसी काम गर्दै रहिछन्　। हामीले खोजेकी महिला तिनै थिइन्　। त्यहाँ भेटिए ४५/५० वर्षका एक पुरुष　। महिलासँग हामीले जानेको भाषामा पनि कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो　। उनले पनि उनको भावना जेनतेन हामीलाई बुझाउन सक्ने हुनाले सजिलो थियो　। चिसा कपडा र झोलाको व्यवस्थापनपछि हामी पनि चुलोछेउमा रहेको पाहुना बस्ने स्थानमा बस्याँै　। गफगाफ सुरु भयो　।
एक अपरिचित व्यक्ति देखेको हुनाले परिचय लिनु स्वाभाविकै थियो　। महिलासँग सोधिहालेँ, ‘उहाँ को हुनुहुन्छ ?’ उनले ठट्टा गर्दै भनिन्, ‘काम गर्ने मान्छे　।’ मैले फेरि सोधेँ, ‘उहाँको घर कहाँ हो नि ?’ महिलाले भनिन्, ‘यहीँ हो　। यो उहाँको पनि परिवार हो, यी सबै बच्चाबच्ची उहाँका पनि हुन्　।’
हामीले तल थकाइ मारेको घरमा भएकी युवती तिनै महिलाकी छोरी रहिछन्　। उनी पनि त्यहाँ आइसकेकी थिइन्　। एक १५/१६ वर्षको केटा पनि त्यहीँ थिए र करिब २०/२२ वर्षकी अर्की युवती पनि त्यहीँ थिइन्　। दुई/तीनजना स-साना बच्चा पनि त्यसै ठाउँमा खेल्दै थिए　। म अल्मलिएँ　। प्रश्न गर्न हच्कें　। मलाई फसाद पर्‍यो　। त्यो घर ती महिलाकै हो　। त्यहाँ भएका तिनैका छोराछोरी हुन् । ती महिलाका लोग्ने तल थिए　। राम्रैसँग परिचय भएको हो　। के भयो
त ? त्यसो भए महिलाले मलाई ढाँटिन् त ? मलाई सम्झना भयो धेरै पहिले सुनेको, हिमाली भेगमा धेरै भाइकी एकै श्रीमती हुन्छिन् भन्ने कुरा　। उनले आफ्नो संस्कृति र संस्कारलाई गिज्याएको भन्ठान्लिन् भनेर अरू प्रश्न गर्न उपयुक्त लागेन　। म उत्सुक थिएँ, तर मौन थिएँ　।
ती महिलाले मेरो कुरा बुझिछन् क्यार आफै भनिन्, ‘हामी गरिबले परिवार फुटाएर कसरी पाल्ने ? कसरी धान्ने　। सबै भाइले आ-आफ्ना श्रीमती र परिवार बनाए भने घर कसरी बनाउने ? परिवार कहाँ राख्ने र के खाने ?’ उनले मलाई बुझाउँदै गइन्　। उनीहरू -लोग्नेहरू)का बाबुहरूको पनि यस्तै थियो　। धेरै बाबु र एउटी आमा । उनीहरू तीन भाइकी श्रीमती हुन् उनी　। तर, कान्छाले अघिल्लो साल अर्को श्रीमती ल्याएकाले उनी परिवारबाट मात्र होइन, गाउँबाटै निकालिए ।
तल्लो घरमा भेट भएका उनका ‘जेठो’ श्रीमान् पनि आए　। ‘माहिला’ लोग्ने आजै मात्र व्यवसायबाट घरमा पुगेका रहेछन्　। खानाको तरखर भयो　। खानाभन्दा पहिले चाहनाअनुसार छ्याङ, रक्सी वा तिब्बती चिया पिउन सुरु भयो　। महिलाले पनि रक्सी पिउँदा रहेछन्　। लोग्ने-स्वास्नीमा समानता देखिए पनि केही व्यवहार र कुराकानीबाट त्यस घरमा महिलाको भूमिका बढी छ र परिवारलाई उनैले पथप्रदर्शन गरेकी छन् जस्तो देखिन्थ्यो　। ठट्टैठट्टामा मैले उनलाई सोधेँ, ‘यी छोरीलाई पनि धेरै भाइको एउटै श्रीमती बनाएर बिहे गरिदिने त होला नि ?’ आमाले सहज तरिकाले भनिन्, ‘हाम्रो परम्परै यस्तै छ, हाम्रोजस्तै हुन्छ होला, नहुन पनि सक्छ　भन्न सकिँदैन　।’
उनलाई यस परम्पराप्रति कुनै पछुतो छैन　। परिवार फुटाउनुभन्दा जुटाउनु ठीक हो भन्ने उनको धारणा थियो　। हामीले खाना खायाँै　। हामीलाई सुत्नका लागि अगेनाको पूर्वतर्फको छेवैमा ओछ्यान तयार भए　। अगेनाको पश्चिमतिर दुई छोरी सुते　। उत्तरतर्फको भागमा जेठो लोग्ने सानो बच्चा लिएर सुते　। हामी सबै सुतेको स्थानबाट कान्छो लोग्ने र मुख्य पात्र महिला अलप भए　।
भोटवासी प्रायः चौँरी, घोडा, भेडा, बाख्रा चराउन गोठमा जान्छन््　। विभिन्न स्थानमा गएर व्यापार व्यवसाय गर्छन्　। सबै भाइ सँगै हुँदैनन्　। सबै भाइ सँगै भइहाले पनि महिलाले विवेक पुर्‍याउने र न्याय पूर्ण तरिकाले परिवार सञ्चालन गर्ने गर्छन्　। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढीको एउटै श्रीमती हुनुका मुख्य कारण परिवार फुट्ने, सम्पत्ति विभाजित हुने डर नै हो　।
माथिल्लो डोल्पाको भिजेरमा झन्डै ३५ घर कुरियामा आठ/दस घरमा बहुपतिप्रथा छ　। तिन्जे गाउँमा पनि बाह्र/चौघ घरमा यस्तै परिवार छ　। ढाडगाउँ, मुकोट, छार्का, धो, तिलिङ, कोमास, सिमेन आदि गाउँमा पनि यो परम्परा देख्न सकिन्छ　। यो परम्पराले दाजुभाइमा आपसमा समर्पण पनि दर्साउँछ　। मेरी श्रीमती, मेरो सन्तान नभनेर व्यक्तिगत स्वार्थ विपरीत हाम्रा सन्तान, हाम्रा बाबुहरू हाम्रो परिवार, हाम्री श्रीमतीजस्ता सामूहिक भावना यस परम्परामा लुकेको पाइन्छ　।
रमाकान्त शर्मा (लेखक, डोल्पाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्)